IiNdumiso Chapter29 1 Umhobe kaDavide. Mnikeni uYehova, nina nyana bakaThixo, Mnikeni uYehova uzuko namandla. 2 Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe; Qubudani kuYehova nivethe ezingcwele. 3 Izwi likaYehova liphezu kwamanzi; UThixo wozuko uyadudumisa, KwauYehova phezu kwamanzi amaninzi. 4 Izwi likaYehova linamandla, Izwi likaYehova linobungangamela; 5 Izwi likaYehova laphula imisedare, UYehova waphula imisedare yaseLebhanon. 6 Uyidlobisa njengenkonyana, ILebhanon neSiriyon njengethole lenqu. 7 Izwi likaYehova lilenyise okwamalangatye omlilo, 8 Izwi likaYehova liyenza isaqhwithi intlango, UYehova uyenza isaqhwithi intlango yaseKadeshe. 9 Izwi likaYehova lizuzisa amaxhamakazi, Lihlube amahlathi; Etempileni yakhe into yonke iphela ithi, Luzuko! 10 UYehova wahlala kunogumbe, UYehova uhleli enguKumkani ngonaphakade. 11 UYehova uya kubanika abantu bakhe amandla; UYehova uya kubasikelela abantu bakhe ngoxolo. [ Prev ]